Kaddib xiisadda u dhexeysa N’Golo Kante iyo Frank Lampard, Xiddiga reer France oo ku riyoonaya inuu u dhaqaaqo Kooxda… – Gool FM
Kaddib xiisadda u dhexeysa N’Golo Kante iyo Frank Lampard, Xiddiga reer France oo ku riyoonaya inuu u dhaqaaqo Kooxda…
(London) 13 Okt 2020. N’Golo Kante ayaa la soo warinayaa inuu ku riyoonayo inuu ku riyoonaya inuu ku biiro Kooxda Real Madrid, kaddib xiisad la sheegay inay ka dhex taagan tahay isaga iyo tababarihiisa haatan ee Frank Lampard.
Xiisadda u dhaxeysa N’Golo Kante iyo Frank Lampard ayaa laga yaabaa in la arko xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska inuu ka tagayo Chelsea, maadaama ay u muuqato inuu ku riyoonayo u dhaqaaqista Real Madrid.
Warsidaha Le Parisien ayaa warinaya in Lampard uu diiday inuu Kante ka maqnaado tababarka si uu uga qeyb galo Arooska saaxiibkiis, go’aankaas oo uu 29-sano jirkaan ku dhibtooday inuu aqbalo.
Shabakaddan shacbiyadda badan ee Faransiiska ayaa sheeganeysa inuu Kante ku riyoodo inuu u dhaqaaqo garoonka Bernabeu, laakiin kooxda heysata La Liga ayaan weli wax xiiso ah u haynin xiddigii hore ee Naadiga Leicester City.
Kante wuxuu haystaa qandaraas ku eg ilaa dhammaadka sanadka 2023-ka, maamulkiisuna wuxuu rumeysan yahay inay u fududaan doonto xiddigan inuu sugo xagaaga soo aaddan.